I-Shongwe Guest Lodge - I-Airbnb
I-Shongwe Guest Lodge
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguShamiso
I-Shongwe likhaya elihle lakudala elikude nekhaya, elikwiiNtaba zase-Nyanga. Ukuqhuba iiyure ezine ukusuka eHarare & kumbindi weemizuzu eyi-5 ukusuka eTroutbeck Lodge & Resort. Indlu encinci enomtsalane epinki ehleli kwinduli ejongene neentaba zaseMozambiki, enengxangxasi esemhlabeni (ngamaxesha athile onyaka). I-Shongwe yindlu endala, ukuba uyazithanda izindlu ezindala ezinefashoni uza kuthandana nomtsalane wayo wakudala wesikolo kunye nezinto zale mihla. Yonwabela iindawo eziqaqambileyo kunye nokuzola okukhoyo.
Ngobuntu obuninzi kunye nesitayile, u-Shongwe unika undwendwe ngalunye imvakalelo yokufika ekhaya. Phinda unxibelelane, uphumle uze uphinde udibane nabanye uze wonwabele ukubuka iintaba ezintle, mhlawumbi uhleli ngasemlilweni endlini okanye ngaphandle kwe-gazebo. Le ndlu ibhukishelwe wena nentsapho yakho okanye abahlobo bakho kuphela ngalo lonke ixesha oza kulihlala.
4.56 · Izimvo eziyi-16
Iindawo ezikufutshane ezikhuselekileyo - ungahamba kusasa, emva kwemini okanye ngokuhlwa. Ukubona le ndawo kumnandi!!
Umbuki zindwendwe ngu- Shamiso
Kukho umgcini wendlu oza kukuvulela izitshixo xa ufika aze akunike izitshixo. Umntu okhathalelayo uza kufumaneka ukuze acoce amagumbi yonke imihla aze aye kuzo naziphi na izinto ozidingayo xa uhlala nathi. Iinkonzo zokupheka ziyafumaneka xa kucelwa ngemali eyongezelelweyo.
Kukho umgcini wendlu oza kukuvulela izitshixo xa ufika aze akunike izitshixo. Umntu okhathalelayo uza kufumaneka ukuze acoce amagumbi yonke imihla aze aye kuzo naziphi na izinto oz…